Buug-yaro wargelin ah: waxa ay yihiin iyo tusaalayaal ka mid ah kuwa aadka loo isticmaalo uguna wanaagsan | Hal-abuurka khadka tooska ah
Haddii aan muujino wax xayeysiis ah ama walxo macluumaad leh oo bixiya macluumaadka oo ka caawiya in la qorsheeyo si ay u gaarto tiro isticmaaleyaal ah, Waxa hubaal ah inay noqon lahayd buug-yaraha. Qaybta naqshadeynta garaafyada, buug-yaraha ayaa qayb ka ah naqshadaynta tifaftirka iyo xayeysiinta, mana aha oo kaliya dhexdhexaad khadka tooska ah, laakiin sidoo kale aad ayey ugu jiraan nolol maalmeedkeena.
Maalin kasta, shirkaduhu waxay u baahan yihiin inay kor u qaadaan wax soo saarkooda waana sababta ay muhiim u tahay in la ogaado sida loo sameeyo iyo siyaabaha jira ee loo sameeyo. Maqaalkan, waxaan u nimid inaan mar kale kaala hadalno naqshadeynta tifaftirka laakiin maaha sida qayb muhiim ah, laakiin sida hal shay oo kale.
Taasi waa sababta shaqada naqshadeynta ama naqshadeeye loo sii xoojiyay maalin kasta maadaama ay muhiim tahay in horay loo sii ogaado waxa ay u yihiin naqshadahooda xiga. Sababtan awgeed, waxaan dooneynaa inaan sharaxno waxa uu yahay buug-warbixineed waxaanan ku tusi doonaa tusaalooyin dhowr ah oo qaarkood ah. Waxaan sidoo kale ku tusi doonaa mid kastaa waxa uu yahay iyo sababta ay u jiraan noocyada iyo adeegsigooda.
1 Buug-yaraha macluumaadka
1.1 Tilmaamo Fudud
2 Tusaalooyinka Buug-yaraha
2.1 Nooca 1
2.1.1 Albaabka laablaaban
2.1.5 Warqado ama warqado
3 Brochure Naqshad Apps
Xigasho: daabacaad waalid
Qoraal-warbixineed waxa lagu qeexaa inuu yahay nooc dukumeenti ama fayl ah oo, sida ereygiisu tilmaamayo, waxaa lagu gartaa in ay ka kooban tahay macluumaad iyo soo jeedin iyo wargelin isticmaalaha wax ku saabsan. Shaqadeeda ugu weyn waa in ay u gudbiso fariinta qofka qaata, taas oo ah sababta aan uga helno hay'ado ama shirkado kala duwan ama xitaa qaybo kala duwan, tan iyo mid kasta oo ka mid ah shirkadahani waxay ogeysiiyaan macmiilka alaabtooda iyo qiyamka shirkadda.
Taasi waa sababta maalinteena maanta, aan ku noolnahay hareeraha dhammaan noocyada buug-yaraha oo nagu wargeliya. Dunida ganacsiga ama xitaa suuqgeynta dhijitaalka ah, buug-yaraha waxaa loogu talagalay in lagu hormariyo astaanta waana qayb ka mid ah dhexdhexaadinta xayeysiinta. Haddaba ma jiraa xidhiidh dhow oo ka dhexeeya xayaysiisyada, naqshadaynta iyo buug-yaraha? Hagaag haa, runtu waxay tahay in xidhiidhku aad u dhow yahay maadaama midna waxba noqon lahaa kan kale la'aantiis.
Inta badan buug-yaraha macluumaadka. inta badan waxaa loo qaabeeyey qaab ay ku jiraan qoraal ku filan isticmaaluhu si uu u qabsado macluumaadka lagama maarmaanka ah. Taasi waa sababta waxa caadiga ah ee buug-yaraha ku jira ay tahay in la helo cinwaan weyn, astaanta astaanta, qoraal hoosaadyo iyo qoraal sare oo la socda dhammaan macluumaadka. Qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa sidoo kale ka kooban faahfaahinta kale ee xiisaha macmiilka, sida lambarka taleefanka shirkadda, fakis ama ciwaanka iimaylka, ama shabakad bulsho oo diiwaan gashan.
Haddii aan muujino shaqada naqshadeeyaha, Buug-yaruhu wuxuu inta badan ka kooban yahay walxaha garaafyada sida sawirada, calaamadaha, xarfaha hal-abuurka, qaababka joometeriga, midabada, sawirada, iwm. Dhammaan walxahan ayaa ah kuwa u soo jiidaya dareenka qaab muuqaal ah oo ku saabsan qaataha.
Qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa sida caadiga ah leh cabbir lagu garto, taas oo ah, shirkado badan ayaa isticmaala qaabab waaweyn si ay u qabtaan dareenka dadweynaha, habkan. Baaxadda weynaanta, ayaa inta badan macluumaadka macmiilku ka helayo shirkadda.
Xigasho: Time Studio
Iyada oo ku xidhan xajmiga iyo isticmaalka aan rabno in aan siino buug-yaraha macluumaadka, inta badan waxaa loo qaybiyaa laba nooc oo kala duwan, kuwaas oo mid kastaa uu ka kooban yahay sifooyin kala duwan waxaana badanaa loogu talagalay ujeedo kale.
Iyadoo ku xiran qaabka ay caadi ahaan yihiin:
Buug-yaraha macluumaadka albaabka isku laabma waa qaab aan aad uga jirin shirkadaha badankood. Maxaa sifadan u sabab ah? Hagaag, waa shaki la'aan sababtoo ah naqshadeeda iyo qiimaha dhaqaale ee ay xambaarsan tahay daabacaadda ka dib. Qiimahoodu aad ayuu u sarreeyaa, sidaas darteed waxaa inta badan loo adeegsadaa qaybaha ay ka midka yihiin makhaayadaha aadka u sarreeya ama shirkadaha kuwaas oo lacag badan geliya alaabtooda.
Inta badan waxaa loo qaabeeyey laba siyaabood: afar ama xitaa siddeed qaybood oo inta badan way ku habboon yihiin haddii waxa aad rabto ay tahay inaad isticmaasho ilo garaaf ah oo booska si ka sii weyn u beddelaya, sida sawir weyn ama sawir qayb weyn ka ah qaabka.
Triptych waa qaab gaar ah, waxaa lagu gartaa in loo qaybiyo, sida magaciisa ka muuqata, oo loo qaybiyo saddex qaybood oo aad u faa'iido leh haddii waxa loogu talagalay loo qaybiyo loona qaybiyo xogta si cad oo nidaamsan. Waxaan ku heli karnaa siyaabo badan laakiin tan ugu caansan waa in lagu helo qaab saddex ama xitaa lix qaybood.
Gaaban, haddii waxa aad raadinayso ay tahay buug-yar oo ay ku jiraan macluumaadka si aad u wanaagsan oo loo qaybiyay oo leh meel ku filan, waxaad mar walba dooran kartaa qaabkan oo kale. Intaa waxaa dheer, waxaad ka heli kartaa iyaga oo leh cabbirro kala duwan iyadoo ku xiran hadba inta macluumaadka iyo walxaha aad rabto inaad ku darto buug-yarahaaga.
Sida triptychs, Warqadaha sidoo kale waa buug-yaraha caadiga ah kuwaas oo inta badan aad looga mahadceliyo qaybaha ama shirkadaha kala duwan. Farqiga u dhexeeya ayaa ah in kuwan loo naqshadeeyay si ay u kala qaybiyaan laba qaybood.
Buug-yaraha noocaan ah waxaa badanaa loo qaybiyaa afar qaybood, taas oo ah, waxaa ku jira daboolka hore, daboolka dambe iyo labada qaybood ee inta badan gudaha ah. Waxa lagu garto buug-yarahaan waa in macluumaadka si aad u wanaagsan loo qaybiyo, kaas oo bixiya akhrin aad u wanaagsan.
Waa nooca ugu habboon ee buug-yaraha haddii waxa aad raadinayso ay tahay inaad haysato meel ku filan oo aad ku soo bandhigto dhammaan macluumaadka iyo qaybinta waxyaabaha kala duwan ee aad rabto inaad bixiso, isla sidaas ayaa ku dhacda triptychs-kii aan hore u soo sheegnay.
Buug-yaraha noocaan ah waa mid ka mid ah kuwa ugu hal-abuurka badan, iyada oo aan la xusin in uu yahay kan ugu hal-abuurka badan naqshaddiisa awgeed, kaas oo ah qaabka z ama sida magaciisa ka muuqata, qaab zigzag ah. Waa buug lagu sifeeyey ka kooban lix qaybood waxaana badanaa aad faa'iido u leh in la abuuro macluumaad ka kooban sawirro ama sawirro sifo leh.
Tusaale ahaan, inta badan waxay ciyaartaa doorka khariidadda ama hagaha, maadaama qaabkeedu uu ku habboon yahay in la siiyo isticmaalaha la socodka dhammaan macluumaadka la saadaaliyay.
Warqado ama warqado
Warqadaha ama warqadaha inta badan waxaa lagu gartaa xaqiiqda ah in sawirka ama sawirka lagu daabacay ay noqdaan kuwa ugu muhiimsan ee qoraalka, yacni, inta badan waa buug-yaraha halkaasoo qadarka akhbaartu ay ku yar tahay iyo halka sawirku ka badan yahay.
Jaleecada hore waxaan ka hadli karnaa boodhadhka, laakiin inkastoo ay leeyihiin sharraxaad la mid ah, waxay ilaalinayaan kala duwanaansho gaar ah. Caadi ahaan sidoo kale waxay leeyihiin qaab afar gees ah ama leydi ah, laakiin si ka duwan boodhadhka, kuwan waxaa badanaa loo isticmaalaa ujeeddooyin ganacsi oo keliya, taas oo ah, si loo muujiyo iibka soo socda ama qiimaha la dhimay, haddii aan ka hadalno qaybaha sida dukaamada dharka.
Marka la soo koobo, haddii waxa aad raadineyso ay tahay inaad ku soo jiidato dareenka macaamiisha iyada oo loo marayo shay kooban oo fudud, warqad warqad ah ayaa ah waxa aad u baahan tahay oo dhan.
Boodhka waxaa lagu qeexaa inuu yahay nooc ka mid ah buug-yaraha la daabacay, badanaa wuxuu leeyahay qaab afar gees ah ama leydi ah waxaana badanaa lagu daabacaa cabbirro kala duwan. Inta badan shirkadaha ama warshadaha ayaa ku daabaca booraradooda cabbirka A3 ama A2. Waxay yihiin cabbirro waaweyn, maadaama ay ku gaadhaan goob muuqaal sare ah qof kasta oo iyaga u fiirsada.
Sida kor ku xusan, waa buug-yaraha halka sawirku yahay jilaa, waana sababta ay muhiim u tahay codso agab garaafyo muuqaal ah oo tilmaamaya xiisaha daawadaha: Wajiyada nooca casriga ah iyo kuwa hal-abuurka leh, midabyo adag ama si sahlan loo aqoonsan karo sawirro iyo sawirro.
Inta badan qaybaha isticmaala qaabkan ama buug-yaraha waa dukaamada ciyaaraha fiidyowga, boodhadhka shineemo ee lagu xayeysiiyo filimada, tiyaatarada ama xitaa haddii aad doonayso inaad xayaysiiso dhaqdhaqaaq bulsho.
Brochure Naqshad Apps
Marka aan ku tusinno qaar ka mid ah tusaalooyinka aadka loo isticmaalo iyo kuwa la arko ee buug-yaraha wargelinta ah, waxaan ku dhaafineynaa hage yar oo aad ka heli karto qaar ka mid ah codsiyada ama qalabka aad ku bilaabi karto naqshadeynta buug-yarahaaga ugu horreeya meel eber.
InDesign: InDesign waxaa iska leh Adobe waana ilaa hadda mid ka mid ah qalabka ugu fiican ee lagu barto sida loo habeeyo buug-yaraha ama buug-yaraha. Waad ku mahadsan tahay qalabkeeda qoraalka iyo qaababka daabacaadda ee kala duwan ee ay bixiso, waxaad awoodi doontaa inaad sameyso buug-yarahaaga ugu horreeya. Intaa waxaa dheer, waxaad sidoo kale abuuri kartaa shabakado si aad ugu qaybiso dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka ah si aad u nidaamsan.
Canva: Haddii aad raadinayso doorasho bilaash ah, waxaad dooran kartaa Canva, tifaftir online ah oo leh kumanaan iyo kumanaan qaab-dhismeedka halkaas oo aad ka soo dejisan karto oo aad ka beddeli karto sidaad rabto. Waa mid ka mid ah qalabka xiddigaha haddii aad ka bilaabayso adduunka naqshadeynta.
Microsoft Word: Haddii aad tahay qof jecel Microsoft isla markaana jecel naqshadaynta tifaftirka, ma seegi kartid qalabkan halkaas oo aad ka abuuri karto qoraalladaada ugu horreeya, oo isku day in aad ka mid noqoto xidhmooyinkeeda kala duwan ee xarfaha oo ha lagu qaado hababkeeda kala duwan. Waa ikhtiyaar yar oo bilaash ah maadaama ay u baahan tahay lacag bixin bille ah ama sanadle ah, laakiin kharashku waa u qalantaa maadaama ay bixiso qaabab xiiso leh si loo bilaabo tafatirka.
Buug-yarahaagu waxa ay ahaan doonaan nolol maalmeedkeena, markaa waxaa muhiim ah in aad taqaanid sifooyinkooda iyo tusaalooyinka kala duwan ee jira. Waxaan rajeyneynaa inaad wax badan ka baratay nooca xayeysiiska ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » buug-yaraha macluumaadka